Dib-u-soo celinta Xeebta Bilowga ah ee Daraasadaha Kiisaska ee Mashruuca - Dulmiga Ellicott
Qashin qubka Sebastian Inlet wuxuu bilaabmayaa
27 Maarso 2007 Xigasho: Qoraa Jim Waymer, FLORIDA MAANTA Ellicott® Brand Series 970 oo ay leedahay Shirkadaha SubAqueous ee shaqada ka haya Florida SEBASTIAN - Kabtanka doomaha ayaa muddo tobannaan sano ah ku soo caariday xeebta badda ee loo hanjabay. Laakiin ugu dhakhsaha badan waxay dib u laaban karaan xoogaa nasasho ah markay xeebta marayaan marin biyoodka aaminka ah, oo hadda caan ku ah mid ka mid ah kuwa ugu khayaanada badan Florida. Ka dib markii uu ku guuleystey halgan toban sano socday oo ogolaansho federaal ah, Sebastian Inlet District toddobaadkan wuxuu bilaabmayaa $ 5 milyan oo qashin ah si loo soo celiyo xeebta duufaanku baabi'iyay iyo in loo maro marin biyood qoto dheer ...
Dib u buuxinta Xeebta ee New Jersey
Febraayo 2006 Xigasho: Sheekada Daboolka QODOBKA QARANKA Macdanta & Dhismaha Trevcon's 12 in., 370HP Ellicott® brand cutter nuugista (CS) dredge deep Wreck Pond, New Jersey, USA Dredge operator Ed Whitehurst Sand waxaa laga sii daayaa 5,000 ft iyada oo loo marayo dhuumaha xeebta lagu buuxinayo Guga Xeebaha harooyinka iyo badweynta ee dhinaca badweynta ee qandaraasle qandaraasleyaal maxalli ah ayaa ka caawiya xaafadaha hareeraha duufaanka duufaanka dib u soo celinta deegaan dabiici ah waxayna dhistaa xeebo. Wreck Pond waa kheyraad dabiici ah oo 80-acre ah, oo leh geedo abuur iyo guri ka mid ah tuubada tuubada waxayna ku taal bariga ilaa galbeedka aragtida waqooyi-galbeed ee u dhow Badweynta Atlantik. Balligu sidoo kale waa ...
Taxanaha Ellicott®Brand 1170 "Dragon®" Dredge oo loo adeegsaday Port Said, Mashruuca Balaadhinta EGYPT
June 2001 Source: World Dredging Mining & Construction, by Mort Richardson, Publisher Ellicott® Brand Series 1170 Dredge Arab Contractors 'Ellicott® Brand Series 1170 Dredge “OSMASON II” Mashruuc qodis ah ayaa la siiyay shirkadda Masar, Qandaraasleyaasha Carabta, si loo sii wado haro u dhow dhinaca koonfureed ee Port Said. Ujeeddada qandaraaska ayaa ahayd dib u soo celinta dhul kaabayaal cusub, iyadoo la ballaadhiyey saldhigga dhulka ee dekedda. Isticmaalka dhulka waxaa loogu talagalay guryaha cusub iyo horumarka jaamacadeed labadaba. Mashruucu wuxuu bilaabmay bishii Diseembar ee 1999 waxaana la filayaa inuu dhammaado Juun 2001. The ...
Cape Cod, Massachusetts - Dredging in the Crown Jewel of New England iyadoo la adeegsanayo Ellicott®Brand Series 670 "DRAGON®" Dredge
Waxaa laga soo xigtey: Mud Cat ™ Div., Baltimore Dredges, LLC Markuu qofku maqlo xeebta adduunka oo caan ka ah - Cape Cod - fikradaha isla markiiba waxay aadaan xagaaga, dabeylo bada oo diirran, carro ciideed, guryo kiro ah oo xeebta ku yaal, iyo shiraaqo buuxa oo ku yaal Atlantic ! Marar dhif ah ma jiraa qof ka fikiraya sida shiraaqa iyo doonyaha quwadda leh ay si xor ah ugu dhaqaaqi karaan, ugu dhex wareegi karaan badda, ama u heli karaan marinka badda? Iyadoo aan la faaruqin waligeed lama sameyn karin maxaa yeelay dabeecadda, si isdaba joog ah oo aan la sii saadaalin karin, waxay dhigtaa ciid, quruurux, iyo dhoobo meelaha laga soo galo irridaha muhiimka u ah marin u helka badda. Waxay u egtahay mid fudud, kaliya dhig meel hoose ...
Harooyinka Harooyinka Weyn & Dock waxay adeegsadaan Ellicott® Brand Cutter Dredge Difaaca Badbaadada KETA ee Gaana, Afrika
Xigasho: Sheekada Daboolka Macdanta & Qodista Daadinta Adduunka Keta Lagoon waa biyo fara badan oo macaan oo laga soocay biyaha cusbada ee Gacanka Guinea iyadoo loo marayo dhul cidhiidhi ah. Kani waxa uu la kulmayaa nabaad guur ba'an oo joogto ah. Qeyb badan oo ka mid ah kaabayaasha guryaha iyo dadweynaha ee tuulada Keta, oo ay ku jiraan wadada isku xirta deriskeeda waqooyiga, ayaa ku lumay badda. Baaxada dhulka udhaxeeya Keta iyo Kedzi ayaa kudhacaya heerka laga bilaabo 4.0 ilaa 8.0 m / sanadkii hadana hada meelaha qaar waa kayartahay 50 m. Haddii ...
Magaalada Virginia Beach Erosion Council wuxuu iibsadaa Ellicott® Brand Dredge
Ellicott® International waxay u dhiibtay cutterhead dredge "Rudee Inlet II" Magaalada Virginia Beach, USA. 14-inch Taxanaha 970 qod ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xeebta madadaalada ee magaalada loo dalxiis tago. Derejadu waxay bedeshay nooca loo yaqaan 'Ellicott®' dredge brand-ka oo kharashka waqtigiisa dhimista iyo dayactirka ay keeneen Golaha nabaad-guurka ee magaalada inay ku taliyaan beddelaad. Golaha nabaad-guurka waa koox ka kooban shan xubnood oo lagu soo oogay dayactirka marinka dalxiiska. Goluhu wuxuu ku hayey awood qodista ciidda Rudee Inlet in ka badan 25 sano, isaga oo aasaasaya barnaamij joogto ah oo buuxinta xeebta. Guddi hawleed ayaa u magacaabay Maareeyaha Magaalada inay kormeeraan ...
Cuntada Barnegat Inlet Hada Qoto Dheer - Xeebaha Loveladies Ayaa La Soo Celiyey
30 Ogosto 1995 Xigasho: SandPaper, New Jersey Sida hopper-ka loo qoro "Currituck" wuxuu jiirayaa waxa dabeecadda ku haysa keydka Barnegat Inlet, New Jersey, USA, xeebta Loveladies ee Long Beach Township ayaa mar kale ka faa'iideysta sanadkan. Qeybta Injineerada Ciidanka Mareykanka ayaa dhameystiray 65-maalmood xagaagii. Waxay qaadday 100,000 oo mitir cubic oo ciid ah si ay u baneyso wadada maraakiibta ganacsiga iyo kuwa madadaalada, howl ay qabato sanadkiiba laba jeer. Qiyaastii labaatan kun dhudhun oo dhudhun ah oo ciid ah ayaa lagu soo daadiyay meel ka baxsan xeebta Loveladies Beach. Natiijo ahaan, ayuu yiri Guddoomiyaha Magaalada Frank T. Pescatore, xeebaha halkaas ...